Fanatanterahana ny IEM: hamaky ady amin’ny tsy fandriampahalemana Rajoelina | NewsMada
Fanatanterahana ny IEM: hamaky ady amin’ny tsy fandriampahalemana Rajoelina
Tsy resabe fa azo tanterahina sy hampiharina. Anisan’ny nitondrana famelabelarana teny amin’ny CCI Ivato, omaly ny ady atao amin’ny tsy fandriampahalemana amin’ny ankapobeny. Tafiditra ao anatin’ilay vina IEM entin’ny kandidà Rajoelina izany.
Any amin’ny resaka fametrahana fandriampahalemana indray. Mametraka izany ho laharam-pahamehana rahateo ny kandidà laharana faha-13. Nitondrana famelabelarana tamin’ny alalan’ireo manampahaizana vahiny sy teratany ny ady atao amin’ny tsy fandriampahalemana sy tsy filaminana ankapobeny ary ny lafiny fiarovam-pirenena.
Fitaovana arifomba mifanaraka amin’ny toetrandro
Naranty sy naseho tamin’izany koa ireo fitaovana samihafa avo lenta sy manaraka ny teknolojia ary ny vanim-potoana ankehitriny, tokony hilaina. Anisany ny fanamian’ireo polisy sy zandary ary ny miaramila. Ny fitaovana hiarovana sy hanaraha-maso ny sisintany. Ny fampiasana ny “drones” sy ny “puce” , hiadiana amin’ny halatr’omby… Anisan’ny nitondra famelabelarana ny “Major general”, teratany israelianina Assaf Yariv. Ny tale teo aloha, eo anivon’ny tafika frantsay aty amin’ny ranomasimbe Indianina, i Franck Reigner. Dominique Duval, tale ho an’ny fandaharanasan’ny polisy. Eo koa ny manampahaizana momba ny lafiny fiarovana, i Philippe Costa.
Mametraka fanamby goavana eo amin’ny fiarovana sy fandriampahalemana…
Ankoatra izany, ireo teratany malagasy, amin’ny alalan’ Imbiky Herilaza, mpahay lalàna sady mpitsara, talen’ny ENGM. Ny lehiben’ny etamazaoron’ny tafika teo aloha, ny Jly Andriamanalinarivo Voahangy sy ny inspeketera jeneralin’ny zandarimariam-pirenena teo aloha, ny Jly Rasolofo Lumène. Manampy azy ireo ny misahana ny resaka fiaramanidina, ny Jly Tanjaha Justin ary ny “controleur general de police” , Rasamiarivony Martin.
Fanamby goavana eo amin’ny resaka fiarovana sy fandriampahalemana ary filaminana eto amintsika izao apetraky ny kandidà Rajoelina izao.